Ozi ikpeazụ enyere Giampilieri | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi ikpeazụ enyere Giampilieri
di Paolo Tescione - Eprel 17, 2016
Ozi sitere n’aka Jisos, 29/03/2016.
Kedu ihe ị chere na m na-ahụ taa na mpaghara okpukpe n'ozuzu ya na mkpụrụ obi ọ bụla edoro m nsọ? N'ime ọtụtụ n'ime ha naanị ọgba aghara na mmụọ nke ụwa. Ma n'agbanyeghị oke ọ joyụ nke mmụọ nsọ, n'ụbọchị e nyefere ha onwe ha n'okpukpe, ha sịrị ọfụma na mkpọtụ nke ụwa, na-ekwe nkwa ike na ha ga-ege ntị n'olu m.
Mụ m, mana ọ bụrụ n ’ụwa na-ekwu oke ọgbụgba ya, jiri ọ falseụ ụgha ya, aghụghọ ya, ọ dị m mkpa ịgbachi nkịtị. Ya mere m na-eme. Obere obere ihe onyonyo m na-ehichapụ onwe ya n’elu ụwa na site n’obi mmadụ wepụta mkpụrụ ego ọzọ nke ga-anọchi M. Onwere otutu nkpuru obi ndi edoro nsọ na-eyi agwa okpukpe ma nwee mmuo nke uwa.
Childrenmụ m, ha nile agbahapụla m, juru ha anya dịka ọdịda m si dị. Mkpụrụ obi abụọ ma ọ bụ atọ kwesịrị ntụkwasị obi, ndị na-ele m anya na anya mmiri, nne m, onye na-eso ụzọ m hụrụ n'anya nke ukwuu na Magdalene. Ma olee ebe ndị ọzọ nọ? Ebee ka Peter, bụ nkume nke oké ifufe ga-ada megide? Ebee ka ụlọ ụka ọhụrụ m dị na nkeji ole na ole ga-apụta site na ọnya obi nke obi m nke onye agha na-achọ imeghe? Ọ ga-apụta dịka ifuru kachasị mma n’ime Eluigwe, nke ịhụnanya tụụrụ ime ya ma zụọ ya site n’arụ M na ọbara m, nke ga-aga n’iru ịkwafu ọbara ruo n’ọgwụgwụ oge.
Mymụ m, ọbụnadị ụka m maara na ọnụnọ m ọzọ makana ọ bụrụ na anyị achọpụta ya, ihe agaghị aga otu a. Ọbụghị kwa ndị ahụ, jiri ike nke ọkwa-nchụ-aja ebighi-ebi ha, na-eme ka m si n’eluigwe rịdata, amataghị ya. Agaghị m ajụ ebighi ebi ebighi ebi, nghọtahie ebighi ebi? Ndị ụkọchukwu m, ndị ji iko ihe ụtọ n’aka ha, echefula ị toụ mmiri ọ bụla ikpeazụ, aghọtabeghị na aga-agbanwe ozi-ọma m. Nke a abụghị ihe m chọrọ. Kpee ekpere maka ụka m n’ihi na ọtụtụ mkpụrụ obi efuola.
Ugbua ana m agọzi gị n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.